inona no atao hoe cnc machining?
Ny machining CNC dia dingana famokarana fanalana izay mampiasa fitaovana fanapahana fehezin'ny ordinatera toy ny drills, fikosoham-bary, ary fitaovana fanodinana mba hanesorana ny fitaovana amin'ny sakana matevina, ka mamolavola ny ampahany.
Ny rakitra fandaharana nomerika dia mitarika ny milina CNC amin'ny fomba hanapahana ny sakana (fantatra amin'ny anarana hoe "workpiece") ary ny milina maro dia afaka mampiasa rakitra fandaharana mitovy amin'ny fotoana iray ihany, izay mampitombo be ny hafainganam-pandehan'ny famokarana.
Ny machining CNC dia safidy azo ampiasaina amin'ny famokarana ampahany miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany sy ny famaranana.Ny Senze Precision dia manolotra ny dingana feno amin'ny fikosoham-bary CNC, ny fandavahana, ny mankaleo, ny countersinking, ny fanokafana, ny fametahana, ny reaming, ny tariby EDM sy ny EDM, miampy ny maro hafa.Afaka mamokatra haingana ny faritra machining CNC miaraka amin'ny fandeferana mafy sy toetra mekanika tena tsara izahay.
ny tombony amin'ny cnc machining
1.Tsara kalitao, marina tsara ary vokatra avo lenta.
2.CNC machining serivisy dia afaka mamokatra ny ampahany amin'ny rafitra sarotra.
3. Manohana fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny karazana metaly rehetra: alimo, vy, varahina, vy tsy misy pentina, firaka titane ary plastika.
4. Ny boky kely dia ho mora kokoa sy haingana kokoa ho an'ny famokarana, ary tsara kokoa ny mifehy ny kalitao sy mitahiry ny vidiny.
5. Tsy mila manokatra bobongolo, ny ampahany kely dia tsy hanana vola lasitra avo.
Senze orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny avo 3 4 5 axis CNC Machining ampahany tanana bobongolo OEM amin'ny teknolojia avo lenta.
1. Machining efajoro, mahitsizoro, boribory+ mahitsizoro.
2. Ampiasaina amin'ny fanodinana fiaramanidina, dingana, grooves, gear nify, kofehy, spline shafts, mamorona surfaces sy manapaka workpieces, ary koa ny fanodinana profil sarotra kokoa sns ...
3. Fahombiazana avo lenta, avo lenta.
4. Ampiasaina betsaka amin'ny sampana fanamboarana sy fanamboarana milina izy io.
3. Ampiasaina amin'ny fanazaran-tena, reamers, reamers, paompy, maty ary fitaovana knurling
2.CNC mivadika machining.
3.Injection lasitra, Die cast lasitra
4.Sheet metaly fabricate, tamin'ny laser fanapahana fanompoana.
5. Fitsaboana ambonin'ny tany
6.QC rafitra fitsapana: VMS / CMM QC fisafoana
7.Certification Manana: ISO9001:2015
Fitaovana ho an'ny milina cnc
Famaranana ambony ho an'ny milina cnc
Fitaovana ho an'ny ampahany machining cnc
1.Mandrosoa CNC lathes machining foibe
2.DMG 5 axis CNC machining foibe
3. 3/4 axis CNC machining foibe
5. Mould--plastika / foibe serivisy bobongolo vy
6.VMS+CMM QC rafitra fitsapana.
Mpiasa mahay amin'ny ampahany machining cnc
5 axis CNC machining atrikasa
4 axis CNC machining atrikasa
Rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra
Ny SENZE dia manana dingana fanaraha-maso kalitao, ary nanafatra CMM (Masinina Fandrefesana Coordinate), ary VMS (Projector) mba hahatratrarana ny fenitry ny kalitaon'ny mpanjifa.Ny mpanjifanay dia matoky anay hanome sambany voalohany ary afaka miantehitra amin'ny ekipan'ny injeniera manana traikefa sy fanaterana ara-potoana izy ireo.
Fizarana Masinina Lathing Custom Robot Machining Parts Parts machining anodized Kojakojan'ny milina môtô Precis Machining Part Fizarana milina vy